Enfuvirtide Jiri na nje HIV, Ọgwụ, mmetụta na ịdọ aka na ntị
1. Gịnị bụ Enfuvirtide?
2. Usoro ọrụ Enfuvirtide?
3. Enfuvirtide iji na HIV
4. Etu esi eji enfuvirtide ntụ ntụ?
5. Enfuvirtide usoro onunu ogwu?
6. Kedu ihe mmetụta dị na enfuvirtide?
7. Kedụ ka ekwesiri idobe ntụ ntụ enfuvirtide?
8. Nyocha ndị ọzọ na ntinye aka na Enfuvirtide ntụ ntụ
Enfuvirtide (159519-65-0) bụ ụdị peptide nke a na-eji n'ụwa ọgwụ iji gbochie nje immunodeficiencyiciency (HIV) mmadụ ibunye mkpụrụ ndụ ahụike gị nke nwere ike ịkwalite nsonaazụ ahụ n'ahụ gị. A na-ere Enfuvirtide ma ọ bụ T-20 n'akụkụ dị iche iche nke ụwa n'okpuru aha njirimara Fuzeon. Agbanyeghị, dabere na ebe i si bịa, ịnwere ike ịhụ enfuvirtide na-ere n'okpuru aha ika dị iche, mana ha niile na-arụ otu ọrụ.
Enfuvirtide ntụ ntụ (159519-65-0) na ọgwụ ndị ọzọ ejiri ya na-agwọ nje HIV, nke bụ nje na-akpata ọrịa na-enweghị ike (AIDS). Ikwesiri ighota na Enfuvirtide adighi aria oria HIV, mana o n’enye aka ibelata nsogbu ya na ahu gi. Ndị mmadụ na-a thisụ ngwaahịa a na-ebi ndụ dị mma ma dị mma ebe ọ bụ na a na-echebe mkpụrụ ndụ ha pụọ ​​na nje ahụ. Dị ka ọmụmụ si kwuo, nje HIV bụ nje na-emetụta mkpụrụ ndụ ọcha n'ahụ gị nke na-ahụ maka ịlụso ọrịa ọgụ. Ọ bụ ya mere, n'ọtụtụ ọnọdụ, ndị ọrịa HIV / AIDS anaghị enwe nnukwu ọgụ. Agbanyeghị, Enfuvirtide na-enyere aka n’ichebe mkpụrụ ndụ ahụike gị pụọ na mmebi ọ bụla, si otú a na-eme ka ahụike gị dịkwuo mma.
Enfuvirtide acetate na-ebelata ogo nke nje HIV n’ime ahụ gị, nke na-enyere aka ịkwalite usoro mgbochi gị. Ngwaahịa a na - enyere gị aka belata ohere ị ga-enwe ịrịa nje HIV dịka ọrịa nke na - ebuso ndị ọrịa HIV agha. Ka ị na-a medicationsụ ọgwụ ndị ọzọ HIV / AIDS, ọ dị mma mgbe niile isonyere ha na Enfuvirtide n'ihi na ọ na-enyere ọgwụ ahụ aka ịrụ ọrụ nke ọma ma melite arụmọrụ ha.
Enfuvirtide dị na nyiwe dị iche iche mana ekwesịrị ire ya n'okpuru ndenye ọgwụ dọkịta. Ya mere, tupu ịmalite ịwe ngwaahịa a, gbaa mbọ hụ na ị ga-aga nyocha ahụike, ị ga-enwetakwa ọgwụ ziri ezi n'aka dọkịta gị. Enfuvirtide acetate dị na ntanetị, ị nwere ike ịme iwu gị site na nkasi obi nke ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị. Agbanyeghị, mee nyocha kwesịrị ekwesị iji ghọta onye nrụpụta na onye na-ebu ya tupu ị nye iwu gị. Ọnụ ego enfuvirtide nwere ike ịdị iche dabere na onye na-ere ya. Enwere ọtụtụ ọgwụ ọgwụ adịgboroja na ahịa nke nwere ike ịka njọ ọnọdụ gị. Ọ bụrụ na ịmaghị ebe ị ga-esi nweta ọgwụ ahụ, gwa dọkịta gị maka enyemaka ọzọ.
2. Usoro enfuvirtide?
Dị ka m kwuru na mbụ, Enfuvirtide ogwu ogbugba bụ ọgwụ eji agwọ nje HIV (HIV). Nje virus anaghị eto eto ma ọ bụ mepụtaghachi n'onwe ya, ya mere, ọ na-abata n'ime mkpụrụ ndụ ahụ iji jiri metabolism ha. HIV na-ebutekarị mkpụrụ ndụ sistemụ gị nke a maara dịka lymphocytes CD4 T-helper ma ọ bụ sel ọbara ọcha. Mkpụrụ ndụ na-arụ ọrụ site na ịlụ ọgụ megide ọrịa ọ bụla, na-anwa ịbanye n'ime sistemụ ahụ gị. N'ime usoro mmegharị, HIV na-egbu mkpụrụ ndụ CD-T-helper sel, n'ihi ya, ahụ gị ga-ada mbà, na-eme ka ọ ghara ịlụso ọrịa ọ bụla sochirinụ ọgụ. Nke ahụ pụtara na ị ga - ebute ọrịa site n'ọtụtụ ọrịa ị ga - ebute ebe ọ bụ na ahụ gị enweghị ike ịlụ ha.
Usoro ihe omume enfuvirtide na-eme ka ahụ jupụta na mkpụrụ ndụ CD4 gị ka a ghara ibuso nje HIV agha. Ngwaahịa a na - ekekọta protein na gburugburu nje, nke na - enyere ya aka itinye onwe ya na sel CD4. Ozugbo enfuvirtide kegide na protein ndị a, ọ na-egbochi nje HIV na-ejikọ ọnụ ndụ sel CD4 gị. Rịba ama na, nje HIV nwere ike imepụtaghachi ma mụbaa mgbe mkpụrụ ndụ ihe nketa ya na-abanye na mkpụrụ ndụ CD4 gị. N'ihi ya, enfuvirtide na-ahụkwa na nje ahụ anaghị amụpụtakwa ma na-etokwa na ọnụọgụgụ.
a Usoro ihe eji eme ihe bu ihe oma dị iche na ọgwụ ndị ọzọ na-egbochi nje HIV na ahịa, nke na-alụso nje ọgụ naanị mgbe ọ banyechara mkpụrụ ndụ CD4 gị. Enfuvirtide HIV bụ, ya mere, otu n'ime ọgwụ ndị na-egbochi nje HIV ma nwee ike iji lụso ọgụ nje ọgụ mgbe ọ na-eguzogide ọgwụ ndị ọzọ. Agbanyeghị, ị ka nwere ike were Enfuvirtide naanị gị ma ọ bụ mee ya nhọrọ mbụ gị, ọ ga-eweta nsonaazụ achọrọ. Ruo ugbu a, enweghị ọgwụgwọ HIV mara, mana na enfuvirtide, ị nwere ike ijide n'aka na ịbelata oke nje ahụ na ahụ gị ma belata ọrịa ọ bụla na-ebute ọrịa HIV / AIDS.
Ndị ọkachamara na-atụ aro ka ị were enfuvirtide ntụ ntụ yana ọgwụ ndị ọzọ na-alụ ọgụ HIV na-awakpo nje ahụ n'ụzọ dị iche iche. Na-agbakwunye na ntụ ntụ peptide na ọgwụgwọ dị ugbu a nwere ike ịbụ nnukwu echiche, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọrịa ahụ aghọọla ọgwụ ọgwụ. Ekwuru na ọgwụ a so na ọgwụ mgbochi kachasị ike, ọ bụkwa ndị dọkịta ka enyere ya ọgwụ maka na ha na-a medicinesụ ọgwụ ndị ọzọ na-enweghị mmelite ọ bụla. Ọ nwekwara ike ịtụrụ ya ndị na-anabataghị ọgwụ ndị ọzọ eji alụ ọgụ HIV.
3. Iji Enfuvirtide na HIV
Fuzeon nwere enfuvirtide ntụ ntụ dị ka ihe na-arụ ọrụ, nke mere ka ọ bụrụ ọgwụ kachasị mma maka ịlụ ọgụ na HIV n'ahụ gị. Fuzeon bụ nke otu ọgwụ a maara dị ka onye mmechi mmechi. Ogige ọgwụ ndị dị na otu a dịka Fuzeon, na-egbochi nje HIV ka ọ ghara ijikọ na mkpụrụ ndụ CD4 ma mechaa gbochie ha ịba ụba na ịba ụba. A na-eji ntụ ntụ peptide yana ọgwụ ndị ọzọ na-egbochi nje HIV maka nsonaazụ kacha mma. Dịka e kwuru n'elu, enfuvirtide na-arụ ọrụ site na ijikọta ndị na-edozi ahụ nke na-eme ka ọ dịrị HIV mfe ijikọ na CD4.
Omume a na - eme ka ọ ghara ikwe omume maka nje ahụ ịmaba mkpụrụ ndụ ọbara ọcha ma metụta sistemu gị. N'ọtụtụ ọnọdụ, a na-enye ndị na-a medicationsụ ọgwụ ndị ọzọ ọgwụ enfuvirtide acetate, nje ahụ amalitekwala iguzogide ọgwụ ndị ọzọ edepụtara. Gwa dọkịta gị maka ịmatakwu ozi banyere otu esi ewe ngwaahịa a nke ọma.
Tupu ịmalite ị takingụ ọgwụ a, gbaa mbọ hụ na ị gụrụ ntuziaka ndị eji emeputa enfuvirtide na mpempe akwụkwọ n’ime ngwugwu ahụ. Ntụziaka ga-enye gị ozi ndị ọzọ gbasara otu esi ejikwa ngwaahịa a. Fọdụ Ndị na-eweta Enfuvirtide ga - enye gị ụfọdụ nsonaazụ enfuvirtide ka ị wee mara mgbe ị ga - agakwuru dọkịta gị. Ha na-enyekwa gị ịdọ aka na ntị enfuvirtide ka ị dịrị nchekwa mgbe ị na-ewere ihe ahụ.
Enfuvirtide bụ ngwaahịa ọgwụ, n'adịghị ka ọgwụ ndị ọzọ na-egbochi nje HIV nke a na-eji ọnụ ekwu. Nke a peptide ntụ ntụ nwere nnukwu ụmụ irighiri ihe nke nwere ike gwepịa gị n'ime ahụ gị mgbe ejiri ọnụ kwuo okwu ma ghara ịnyefe ihe ndị achọrọ. Maka peptide ntụ ntụ, jide n'aka na ị ga-enweta nkwadebe ziri ezi ma ọ bụ hapụ dọkịta gị ka ọ meere gị ya. Agbanyeghị, dọkịta gị nwere ike ịzụ gị otu esi akwadebe ntụ ntụ enfuvirtide na ihe mgbaze tupu ị nye ọgwụ ogwu enfuvirtide.
Soro usoro nkwadebe niile nke ọma mgbe ị na-akwadebe ntụ ntụ enfuvirtide. Ekwesịrị ịgwakọta ntụ ntụ ahụ na mmiri na -eme ihe ma nyochaa ihe nlele na anya iji hụ na ngwakọta agwakọla nke ọma tupu ịnye ntụtụ ahụ.
Bido site na iwepu isi iyi a na - eji agbanye mmiri ma dochie ya.
Jiri nwayọ hichaa vial ọ bụla na mmanya na-enweghị mmanya ma hapụ ya ruo oge ụfọdụ ka ikuku wee kpoo.
Jiri sirinji buru ibu nke 3ML ma dọta onye na-ada mmiri laghachi na akara ngosi 1ml, wee jiri nwayọ gbanye ikuku na vidiyo mmiri.
Ugbu a tinye agịga ntụtụ a na-etinye na vial site na etiti anụ ụlọ.
Fanye sirinji ya na mmiri na-enweghị mmerụ ahụ na mpịọkụ Fuzeon na akụkụ.
Na-esote mmiri ahụ na-enweghị atụ, wee hụ na ọ na-agbada nwayọ na Fuzeon ntụ ntụ.
Kpụpụ vial ahụ mana jiri mkpịsị aka gị kpatụ ya ihe dịka sekọnd iri ka ọ gbazee.
Mgbe ọ malitere igbari, wepu ya ka ọ gbazee kpamkpam nke nwere ike were ihe dị ka nkeji iri anọ na ise.
Mgbe agwakọtara kpamkpam, ihe edozi kwesịrị ịdị enweghị ọcha, doo anya, na-enweghị ụfụfụ ọ bụla, ọ bụrụ na azọpụtara ihe ngwọta ahụ, nyekwuo ya oge ka ọ gbazee tupu ịgbanye onwe gị. Ozugbo ihe ngwọta kwụsịrị na n'ụzọ doro anya ị nwere ike ugbu a ị theụ ọgwụ. Ejila usoro ogwu ahụ ma ọ bụrụ n’ị hụ irighiri ihe ọ bụla ma ọ bụ tupu amamịghe ọfụma kpamkpam.
Ọgwụ ndị okenye na-agbakarị bụ 90ml kwa ụbọchị nke a ga-ewere ya ugboro abụọ n'ụbọchị. Ekwesịrị iji ọgwụ ọnụ mu ya na ogwe aka gị ma ọ bụ n'akụkụ apata ụkwụ gị. Ọ bụrụ na ị na-enye nwatakịrị ngwaahịa a, dọkịta gị ga-agwa gị usoro kwesịrị ekwesị yana ugboro ole ị ga-esi gbaa ntụtụ ahụ. O d ị mma ka itughari ebe inpa ya iji nye ha oge igha. Ọzọkwa, gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị na-a medicationsụ ọgwụ ọ bụla ọzọ tupu ịmalite ị enụ ọgwụ infuvirtide.
Enfuvirtide ekwesịrị ka ewere onye ọ bụla na-arịa ọrịa HIV / AIDS wee bulie sistemu nchekwa ahụ ọgụ ebe ọ na - egbochi nje ahụ ijikọ mkpụrụ ndụ CD4 yana igbochi ha imepụta ya. Otú ọ dị, usoro ọgwụgwọ ahụ dị iche maka ụmụaka na ndị okenye. Njikọ Enfuvirtide na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịlụso nje HIV ọgụ bụ nke mepụtara iguzogide ọgwụ ndị ọzọ na-egbochi nje HIV.
Ntuziaka enfuvirtide okenye na-atụ aro maka nje HIV bụ 90mg kwa ụbọchị nke a ga-ekewa abụọ. You ga-agagharị agagharị n'agbanyeghị oke ihu, ogwe aka dị elu ma ọ bụ afọ.
Dosegwọ ọgwụ ụmụaka maka afọ 6 ruo 16, bụ 2mg kwa n'arọ, na usoro a ga-enye ya ugboro abụọ kwa ụbọchị. Usoro kasịnụ maka ụmụaka nọ n'afọ a bụ 90mg kwa ụbọchị. Maka ụmụaka gbara afọ 17 gbagoro na ọgwụ a tụrụ aro ya bụ 90 mg kwa ụbọchị ma ekwesịrịkwa ekewa ya ugboro abụọ kwa ụbọchị.
Ohere Enfuvirtide na-efu?
Ọ bụrụ na ichezọ ị yourụ ọgwụ enfuvirtide gị, were ya ozugbo, ị na-echeta. Agbanyeghị, ịnwere ike ite akwa ahụ ma ọ bụrụ na ọ fọla obere ka usoro ọgwụgwọ ọzọ dị. Ejila uzo ozo were dozie nke onye echefuru; ọ nwere ike ibute nsonaazụ dị egwu. Ọzọkwa, cheta inweta ọgwụ ọzọ ị ga-elere tupu oge ị ga-edenye gị ọgwụ ngwa ngwa.
En gafere ọgwụ onfuvirtide?
Bụrụ na ịdoụbiga ihe ọ anyụ anyụ ókè, chọọ nlekọta ahụike ozugbo ọ nwere ike kpughere gị oke nsonaazụ.
Enfuvirtide ịdọ aka ná ntị
Mgbe ị na - a acụ acetate enfuvirtide egbula ya n'akụkụ ikpere gị, ikpere aka gị, otube ma ọ bụ aka gị. Zere hapụ itinye usoro ogwu ahụ ka ọghọm, ntụpọ ojii, ọnya ma ọ bụ anụ ahụ ọ bụla na-adịghị mma. Iwere enfuvirtide anaghị egbochi gị ịgbasa ọrịa ahụ, yabụ na-enwe mmekọahụ mgbe niile, zere ịkekọrịta ihe dị nkọ na ezé gị. Lelee ntuziaka maka usoro ịchọrọ iji nweta uru kacha elele. Iji nwetakwuo ihe ọmụma, gwa dọkịta gị ka ọ duzie gị n'ụzọ dị iche iche iji gbochie nje HIV.
Enfuvirtide HIV dị ka ọgwụ ọ bụla ọzọ nwekwara ike ikpughe gị nye nsonaazụ dị iche iche dabere n'otú ọgwụ ahụ ga-esi emetụta usoro ahụ gị. Mgbe ụfọdụ enfuvirtide mmetụta na-abụ n'ihi ị overụbiga mmanya ókè ma ọ bụ iji ya eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ mmetụta na-emetụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ enfuvirtide niile. Nchekwa enfuvirtide na-adịghị mma nwekwara ike ibute nsonaazụ siri ike. Offọdụ ndị nkịtị Enfuvirtide mmetụta utịp gụnyere;
Ahụhụ, agụụ, afọ ọsịsa na afọ ntachi
Ahụ mgbu, ọzịza ma ọ bụ mgbakasị ahụ na mpaghara ịgba ọgwụ
Akwara ike na mgbu
Gakwuru dọkịta gị ozugbo ị ga - enweta nsogbu ndị a dị njọ;
Okpo ọnụ n’olu gị ma ọ bụ akpịrị gị, enweghi ike ma ọ bụ mgbanwe nsọ nwanyị
Ihe mgbaàmà nke oria ọhụụ dị ka ọnya afọ na-emegharị ahụ, wheeze ma ọ bụ ọnya na-egbu mgbu.
Ọbara n'ime mmamịrị gị
Mmetụta enfuvirtide nwere ike ịdị iche site n'otu onye gaa na onye ọzọ, yabụ ewerela nke ọ bụla. Gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na mmetụta ndị ị na-enwekarị anaghị akwụsị mgbe oge ụfọdụ gasịrị. Ka ị dị mma mgbe ị na -ewere ngwaahịa a, debe usoro iwu nke dọkịta gị nyere.
7. Kedụ ka aga-esi chekwaa ntụ ntụ enfuvirtide?
Enfuvirtide ntụ ntụ (159519-65-0) ndị na-emepụta ihe na-egosi mgbe niile ka ị ga-esi chekwaa ngwaahịa a mgbe ị na-eji ya na ọbụnadị otu esi atụfu ya. Ngwunye enfuvirtide a na-atụghị edozi na-echekwa dị na ụlọ dị ihe dị ka 20 ruo 25 Celsius. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchekwa na ụlọ okpomọkụ, ịnwere ike idobe ya na friji na gburugburu 2 ruo 8 Celsius. Ọzọkwa, na-echekwa mmiri na-adịghị ọcha na ụlọ ụlọ mgbe niile.
Mgbe ị gwakọtara ngwakọta enfuvirtide, dobe ya na friji na ogo 2 ruo 8 Celsius. Ekwesịrị ịgwakọta ngwakọta enfuvirtide n'ime awa 24. Ejila ihe ahụ mgbe ọ kuchara ume ya, azakwala ya mgbe akara mgbaaka ma ọ bụ mebiri. Mgbe iji enfuvirtide ntụ ntụ, soro ntuziaka FDA banyere otu esi ewepu ngwa ahụ na ọgwụ a na-etinyeghị.
8. Nchọpụta ndị ọzọ na ntinye aka na Enfuvirtide ntụ ntụ
Mgbe ị na-azụta enfuvirtide ntụ ntụ sitere na ndị na-eweta ngwaahịa dị iche iche, gbaa mbọ hụ na ị mere nyocha nke ọma iji hụ na ị nwetara ngwaahịa dị mma nke ga-ekwe gị nkwa nsonaazụ dị egwu. Ọ bụ ezie na aha enfuvirtide Fuzeon bụ akara a na-ahụkarị n'ahịa, ị nwekwara ike ịchọta ngwaahịa a na-ere n'okpuru aha aha ọzọ. Enwere ọtụtụ ndị na-eweta enfuvirtide n'ahịa, ị kwesịrị ị na-aga nke kacha mma. Na Ọnụahịa Enfuvirtide nwere ike ịdị iche site n'otu onye na-ere ahịa na onye ọzọ, ejila ya dịka ihe dị mkpa mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa kwesịrị ekwesị.
Na mkpokọta, enwere mkpa maka ọmụmụ ihe na nyocha ahụike ọzọ iji chọpụta ojiji ndị ọzọ enfuvirtide na ntinye ya. Dị ka ngwaahịa ọgwụ mgbe niile, ọtụtụ ndị ọrụ azụlitela nchegbu, yana inwekwu ọmụmụ nwere ike inye aka n'ịzụlite ọgwụ onfuvirtide. N’aka ozo, enwere ike imeputa ihe ahu n’onu icho igba ma obu abuo kwa onwa. Ka ọ dị ugbu a, enfuvirtide ahụ ka bụ ọgwụ eji arụ ọrụ ma sie ike ma nwee nje HIV. Enwela onwe gị ịgwa dọkịta gị banyere enfuvirtide na gp41.
Zhu, X., Zhu, Y., unu, S., Wang, Q., Xu, W., Su, S.,… & Zhang, T. (2015). Njirimara ọgwụ na nke ụlọ nke nje HIV na AP3 karịrị enfuvirtide: na-egosipụta uru nke atụmatụ peptide artificial. Akụkọ sayensị, 5, 13028.
Blanco, JL, & Martinez-Picado, J. (2012). HIV na-ejikọ ndị na-emechi ihe na ndị ọrịa nwere ahụmịhe. Mkpebi ugbu a na HIV na AIDS, 7(5), 415-421.
Chowdhury, S., & Roy, PK (2016). Ngwakọ mgbakọ na mwepụ nke enfuvirtide na ndị na-egbochi protease dị ka usoro ọgwụgwọ HIV. International Journal nke Nonlinear Sciences na Ọnụọgụ Ọzụzụ, 17(6), 259-275.